Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukuthengiswa kweehotele ngeeholide zeKrisimesi kunye noNyaka oMtsha
Lixesha lokuba ubhukishe indawo yokuhlala ngeKrisimesi kunye neeholide zoNyaka oMtsha! Ixesha eligqibeleleyo lokuchitha i-HK$5,000 eseleyo yevawutsha yakho yokusebenzisa ephelelwa ekupheleni konyaka.
I-Trip.com isungula ukuthengiswa kwe-11.11 yeMega kwiiveki ezimbini ukusuka kwi-1 ukuya kwi-14 kaNovemba, kunye neehotele ezimbini ezidumileyo ezivulekele ukubhukisha ukuya kuthi ga kwi-50% yonke imihla. Okuvuyisayo ngakumbi yi-Trip.com "Iilungelo lokuSebenzisa kathathu", eliya kuqhuba nge-1 kunye ne-11 kaNovemba, apho kuya kubakho i-1) i-HK $ 111 amakhuphoni; 2) 11% isaphulelo samakhuphoni; kunye 3) neentengiso zehotele nge-HK$11 nje.
Ukongeza kwizaphulelo ezahlukeneyo kwizinto ezinomtsalane ezithandwayo kunye namatikiti esiganeko esifana neKeigo Open House kunye noMboniso we "Jurassic X The Dinosaur Park", ii-odolo zokuqala ezili-10 ngomhla we-11 kuNovemba kwi-Ocean Park kunye ne-Ocean Park Water World amatikiti aya kufaneleka itikiti lesibini HK $11.
Ukususela kwi-1 ukuya kwi-10 kaNovemba ukususela kwi-11: 11am imihla ngemihla, kwaye ukusuka kwi-00: 00 (ezinzulwini zobusuku) nge-11 kaNovemba, abasebenzisi be-Trip.com banokuyonwabela ukuthengiswa kwe-flash kwiihotele ezahlukeneyo ezikhethiweyo kwi-HK $ 111 okanye i-HK $ 1,111. Izibonelelo zifike kuqala, zibonelelwe kuqala, azikho ngaphantsi kwamagumbi ehotele angama-50.